Human Trafficking - Amjambo Africa
Aug 9, 2019 | 0
By Stephanie Bratnick, Anti-Trafficking Services Director of Preble Street
Ka ganacsiga dadka ma aha dembi cusub, laakiin waxay dhawaan keentay feejignaan iyo ficil ay qaateen adeegyada bulshada, adeegyada sharciga, fulinta sharciga, iyo dadweynaha guud. Dhibbanayaasha kaganacsiga dadka waxaa lagu qasbay galmo, jirdil maskaxeed si ay u qabtaan shaqooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin kaganacsiga galmada, adeegyada guriga, daryeelka caruurta, shaqada beeraha, iyo makhaayadaha. Dhammaan kuwan waxay ka jiraan gobolkan Maine. Maine waxaa sidoo kale ku nool shaqaale, in badan oo ka mid ah waa muhaajiriinta dhawaan soo galay, kuwaas oo looga faa’iideysto oo loodiro shaqooyin aan cadaalad ahayn taasoo ama mushahar lasiiyo ama aan lasiinin iyo shaqooyin aan ahayn kuwo laga shaqayn karo.
Maadaama ay ku adagtahay inay fahmaan sharciyada iyo nidaamyada waddan cusub, muhaajiriinta ayaa si gaar ah ugu nugul in lookala tahriibiyo gudaha dalka Mareykanka. Muhaajiriinta, ama ha ahaadaan dad magangalyo-doonka ah ama qaxootiga, ma ogaan karaan xuquuqda ay leeyihiin shaqaalaha ama cidda u soo jeeda caawimaadooda. Muhaajiriinta aan sharciyeysneyn ee ku sugan gudaha Maraykanka ayaga oo haysta barnaamijka fiisada shaqaalaha martida ayaa laga yaabaa inaanay raadsan caawimo sababtoo ah waxay ka cabsanayaan in ladabagalo ama lamasaafuriyo. Qaar ka mid ah dadka waddanka soogalay ayaa ka walaaca inay hadlaan iyagoo ubaqaya ahalkooda jooga wadankoodii. Ama waxay ka baqayaan inay waayaan ogolaanshaha inay ka shaqaystaan Maraykanka.
Preble Street waxay daryeeshaa baahida dhammaan dadkii ka badbaaday kaganacsiga dadka tan iyo sannadkii 2013, Adeegyadeena kasoohorjeeda Kaganacsiga dadka (ATS) ayaa ka shaqeynaysay ciribtirka Kaganacsiga dadka ee gobolka Maine. Inkasta oo adeegyadan ATS ay maalgeliso Xafiiska wasaarada Cadaaladda ee Dhibanayaasha Dambiga, hadana ma aha qayb ka mid ah dawladda ama fulinta sharciga.
ATS waxay la shaqaysaa dadkii badbaaday iyo bulshadooda si loo xaqiijiyo in dadka la badbaadiyay ay awood u leeyihiin inay dooran karaan waxa ay rabaan. Iyo inay dib usoo ceshtaan awoodooda nolosha. Waxaan bixinnaa adeegyada maareynta kiisaska khaaska kuwaasoo kajira gobolada oo idil. Waxaana caawinaa dumarka iyo ragga, shakhsiyaadka jirkooda badalay, iyo carruurta kuwaasoo lagu qasbay dhammaan noocyada kaganacsiga dadka oo ay ka mid yihiin galmada iyo shaqada. Dadka aan u adeegno uma baahna inay kudhacdo ka ganacsiga dadka maadaama ay kunool yihiin wadankan Maraykanka. macaamiisha waxaa laga yaabaa in ay lakulmeen kaganacsiga dadka markay joogeen dalkooda, taasoo ku qasabtay inay raadsadaan magangalyo, gudaha xeryaha qaxootiga, ama inta lagu jiro hijrada.
ATS waa khidmo ku salaysan in xooga la saaro kor u qaadista helitaanka adeegyada, taageerada, iyo macluumaadka. Waxaan ka caawinnaa dadka soo badbaaday inay fahmaan adeegyada iyo macluumaadka; waxaan kaloo taageernaa xuquuqda dadka soo badbaaday si ay u doortaan waxyaalaha ay rabaan. Hadafkayagu waa inaan fududeyno bogsashada iyo korniinka iyo kor u qaadista caddaaladda shakhsi ahaaneed iyo nidaam cadaalad ah kaasoo ay helaan dhamaan dadka lakulmay kaganacsiga dadka, qoysaskooda, iyo bulshada.
Waxaan biloownaa lashaqaynta macaamiisha markiiba si loo hubiyo in ay helaan waqti ay kudoortaan sida aan ulashaqaynayno iyo goorta aan lashaqaynayno, oo ay ka mid yihiin helitaanka adeegyada soo socda:
• Maareynta kiisaska khaaska ah
• Caawimaadda baahiyaha asaasiga ah, oo ay ku jiraan daaweynta iyo kadawaynta isticmaalka maandooriyaha
• Daawooyin caawiya in qofku kadawoobo laqabsiga maandoorayaasha
• Caafimaadka Maskaxda iyo La-talinta Isticmaalka Maandooriyayaasha
• Hoyga iyo u gudbinta guryo ay dagaan
• in lagu xidho adeegyada kale, sida daryeelka caafimaadka iyo gargaarka sharciga
• Caawinta helitaanka faa’iidooyinka dadweynaha
• kacaawinta xaalladaha madaniga ah, dambiyada, iyo hijrada
• Adeegyo dhaqanka ee xasaasiga ah
• kacaawinta nidaamka garsoorka dembiyada
Su’aalaha soo socda ayaa laga yaabaa inay kaa caawiyaan xaqiijinta haddii adiga, xubnaha qoyskaaga, ama xubin ka mid ah bulshadu ay soo martay kaganacsiga dadka:
1. Ma lagaa qaaday dukumiinti aqoonsi ama baasaboorkaaga adoon raali ka ahayn?
2. Ma awoodday inaad la xiriirto qoyskaaga ama saaxiibadaa si xor ah?
3. Ma lagugu qasbay inaad qof kale lacagtaada siiso?
4. Miyuu jiray qof kale oo koontoroolayay meesha aad ku nooshahay ama aad ka shaqeyso?
5. Ma lagusiiyay macluumaad qalad ah oo ku saabsan nooca shaqada, mushaharka, ama saacadaha?
6. Ma lagugu qasbay in aad shaqeyso saacado badan, laguuna diido inaad fasax qaadato, ama lagugu qasbay inaad shaqeyso adigoo jiran?
7. Miyuu jiraa qof kuu hanjabay adiga ama qoyskaaga?
8. Ma lagugu qasbay inaad shaqeyso si aad ubixiso deyn?
9. Haddii aad ka yar tahay 18 sano, ma tuugsatay, ma iibisay alaab sharci ah ama aan sharci ahayn, galmo masamaysay, ama noocyo kale oo shaqo ah si aa uhesho lacag, cunto, hoy, ama baahiyo kale?
ATS waxay diyaar u tahay inay kaa caawiso fahamka waxa uu yahay ka ganacsiga dadka, qaabka uu udhoco, iyo sida dhibbanayaashu u heli karaan gargaar. Shaqaalahayaga waxay ku hadlaan luqado badan waxayna diyaar u yihiin inay taageeraan dhammaan xubnaha bulshada ee kala duwan ee gobolka Maine. Fadlan waxaad xor u tahay inaad nala soo xiriirto 207.775.0026 kadib taabo 1334 ama 207.415.8554.
PreviousFrom the Desk of Dr. Ahmed: School Guidance Counselors
NextLoolanka dheer ee wax barashadeed ee ay soo martay Belyse Ndayikunda